Thit Htoo Lwin: 5/22/11 - 5/29/11
16/06/13 - 23/06/13 (128)
မြန်မာလူငယ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများ၏ အခြေခံပညာရေး ကဏ္ဍ
Wednesday, 01 June 2011 15:07 ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာပုဂ္ဂလိက
နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု မကသည့် နှစ်ကာလ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ အဆိုပါကျောင်းများသို့
ပေးသွင်းရသည့် ကျောင်းလခများနှင့် ထိုက်တန်သည့် ပညာအရည် အသွေးတစ်ရပ် ပြန်လည် ရရှိလာစေရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ် အကဲဖြတ်စိစစ်မည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန် မိဘများဘက်မှ မျှော်လင့်နေကြောင်း သိရသည်။
“နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေ ဒီမှာဖွင့်တာ နှစ်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သလို
6/01/2011 06:46:00 PM
The 2600th Sambuddathwa Jayanthi Vesak Celebrated In Myanmar
Wed, 2011-06-01 01:45 — editor
Yangon, 01 June, (Asiantribune.com): The Embassy of Sri Lanka in Myanmar coordinated arrangements to celebrate the 2600th Sambuddhathwa Jayanthi inagrand scale. The Embassy compound which is2½ acres, was decorated and adorned by 140 small Vesak lanterns which illuminated the Embassy premises with the touch of craft brought in by the staff of the Embassy of Sri Lanka in Yangon, and the two craftsmen flew to Yangon with the courtesy of the Sri Lanka - Myanmar Friendship Association in Colombo and the DSI Group of Companies.
Moreover,areplica depicted the birth & entitlement of Buddha which was also displayed for general public on the Vesak Poya day.
In the evening, on 17th Mayaspecial Buddhist chanting and သစ်ထူးလွင်
6/01/2011 11:48:00 AM
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)နှင့် ဂီတ အနုပညာရှင်များ ပူးပေါင်းကာ ဂီတ ၀ါသနာရှင်လူငယ်များ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် ပထမဆုံးကြိမ် ဂီတပွဲတော်ကို ကျင်းပမည်ဟု သိရသည်။ သစ်ထူးလွင်
5/31/2011 07:06:00 PM
ဦးတင်ဦးပြန်ပြောပြတဲ့ ဒီပဲရင်း လုပ်ကြံမှု့ 
UZa Wana on Monday, May 30, 2011 at 8:34am
ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်မှုသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ပါတီ
ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့် ပါတီဝင်များ စည်းရုံးရေးခရီး ထွက်နေစဉ် စစ်ကိုင်းတိုင်း
ဒီပဲယင်းမြို့အနီး ကျည်ရွာတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၇ နှစ် မေလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင်
၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် ရန်ကုန်မှနေ၍ ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ
အထက်မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားနှင့် ကသာ၊ မန္တလေးတိုင်း
မိုးကုတ်နှင့် မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့စဉ်
ပြည်သူများက သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
Myanmar's Suu Kyi calls for China openness amid clampdown
Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi is seen onascreen duringalive video broadcast from Yangon, at Hong Kong University May 30, 2011. (REUTERS/Tyrone Siu)
HONG KONG (Reuters) - Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi urged China's Communist leaders on Monday to be more open and tolerant amidstaheavy clampdown on dissidents and government critics in recent months.
5/30/2011 07:22:00 PM
The VOICE Monday, May 30 - June5, 2011
5/30/2011 06:50:00 PM
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(35)
5/30/2011 06:37:00 PM
အရှေ့လေနှင့် မန္တလေးအဟောင်း အသစ်
Written by ယဉ်မျိုးသွယ် Monday, 30 May 2011 11:12 ယခင် ဈေးချိုတော် ၁၂ ရုံနှင့် နာရီစင်ရတနာပုံခေတ်က မြို့တော် အဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသော မန္တလေးမြို့တွင် နောက်တိုးမြို့နေ လူဦးရေ၏ ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုများက မူလဇာတိကို လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့် တစ်ဆက်တည်း ခေတ်မီ မြို့ပြဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် အဆောက်အအုံများကို ပြုပြင် တည်ဆောက်ကြရာ၌ ရှိရင်းစွဲ သမိုင်း အထင်ကရ အဆောက်အအုံများ၏ တန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဟု မြို့ခံသမိုင်း သစ်ထူးလွင်
5/30/2011 06:01:00 PM
နိုင်ငံရေး ဂီတ နှလုံးခုန်သံနဲ့အတူ...
&amp;amp;amp;lt;A TARGET="_blank" HREF="http://ad.doubleclick.net/activity;src%3D1308080%3Bmet%3D1%3Bv%3D1%3Bpid%3D63087313%3Baid%3D240312903%3Bko%3D0%3Bcid%3D42120002%3Brid%3D42137789%3Brv%3D1%3Bcs%3Dp%3Beid1%3D546696%3Becn1%3D1%3Betm1%3D0%3B_dc_redir%3Durl%3fhttp://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3b17/3/0/%2a/d%3B240312903%3B1-0%3B0%3B63087313%3B3454-728/90%3B42120002/42137789/1%3B%3B%7Efdr%3D240080798%3B0-0%3B0%3B59779338%3B3454-728/90%3B41865797/41883584/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://www.exxonmobil.com"&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;IMG SRC="http://s0.2mdn.net/1308080/PID_1614148_XOM_oilSands_728x90.jpg" width="728" height="90" BORDER="0" alt=""&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;/A&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;IMG SRC="http://ad.doubleclick.net/activity;src=1308080;met=1;v=1;pid=63087313;aid=240312903;ko=0;cid=42120002;rid=42137789;rv=1;&amp;amp;amp;amp;timestamp=2929081;eid1=9;ecn1=1;etm1=0;" width="0px" height="0px" style="visibility:hidden" BORDER="0"/&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;IMG SRC="" width="0px" height="0px" style="visibility:hidden" BORDER="0"/&amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;lt;IMG SRC="" width="0px" height="0px" style="visibility:hidden" BORDER="0"/&amp;amp;amp;gt; ဇေယျာသော် ဖေ့စ်ဘုတ် မှ ဓါတ်ပုံ
ဧရာဝတီ Friday, 20 May 2011 18:34 အင်တာဗျူး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ် ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ကော့သောင်း ထောင်မှ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော ဇေယျာသော်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ကိုထွေးက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။ သစ်ထူးလွင်
5/30/2011 11:57:00 AM
Child Care (youth) နှင့် စေတနာရှင်များ ကော့မှူးမြို့နယ်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်း
Sunday, 29 May 2011 16:12 Written by info.NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်များ ၊ စေတနာရှင်လူငယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Child Care (youth) အဖွဲ့ဟာ ယနေ့နံနက် (၉)နာရီမှာ ကော့မှူးမြို့နယ် ဘုရားကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ အခမဲ့ ပညာဒါန ကြောင်းသို့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မူလတန်းကနေ န၀မတန်းထိ သစ်ထူးလွင်
5/30/2011 12:41:00 AM
ဦးနေမျိုးဝေ နဲ့ အဖွဲ့ ဆန္ဒပြခွင့်ပြုဖို့ အစိုးရ ဆီ စာတင်ထား
သို့ဦးနေမျိုးဝေ
တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ 
ရက်စွဲ။ ၂၆. ၅. ၂၀၁၁
5/29/2011 11:48:00 PM
မောင်သော်က ပြောသောပုံပြင်များ(၄) အသံဖိုင်နားဆင်နိုင်ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းထုိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာ ရာဇဝင်ထဲက မကျေနပ်မှုတွေကို ထုံးတို့မှတ်ထားပြီး စီးပွားရေးအရ ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေကြတဲ့ နုိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ ဟန်ဆောင် ဆက်ဆံနေခဲ့တာဟာလည်း နှစ်ပေါင်းရာချီကြာခဲ့ကြပါပြီ၊ စီးပွားရေးအရ ဘယ်လုိုပဲ အသာစီးရ ဆက်ဆံနေရစေဦးတော့ ထုိုင်းနိုင်ငံဟာ နယ်ချဲ့ဗမာတွေကို ရာဇဝင်ကြွေးဆပ်ဖို့ အမြဲလုို ခြောင်းမြောင်း နေခဲ့ပါသတဲ့။
5/29/2011 10:44:00 PM
ရန်တွေရှင်းအောင် ချစ်သူ ရွေးမှာပါ
Written by ခင်လေးမြင့် Thursday, 28 April 2011 10:14 ဘ၀မှာ လှေကားထစ် များစွာ ရှိသလို အချိုးအကွေ့ များစွာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘ၀ တိုးတက်ရေး အတွက် လှေကားတွေကို တက်ရတာ လွယ်ကူမှု ရှိနိုင်သလို ခက်ခဲမှုတွေလည်း ရှိမှာပါ။
လှေကားတွေပေါ် တစ်ထစ်ချင်း တက်နိုင်ပြီးရင်တော့ ပြန်ပြုတ် သစ်ထူးလွင်
5/29/2011 10:23:00 PM
အလုပ်သင် ဆရာဝန်လစာ အဆတစ်ရာနီးပါး တိုးမြှင့်ပေးရန်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် ရေပန်း အစားဆုံး ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မှတ် မြင့်မားစွာ ရရှိထားရန် လိုသော ဆေးတက္ကသိုလ်ဆင်း အလုပ်သင် ဆရာဝန်များ၏ လုပ်ခလစာ နှုန်းထားများကို မူလ ရရှိနေသည့် နှုန်းထားမှ အဆတစ်ရာ နီးပါးအထိ တိုးမြှင့် ပေးသွားရန် ရှိကြောင်း နေပြည်တော်ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ အသက် ၅၃ နှစ် အရွယ် ပါမောက္ခဟောင်း အကြီးတန်း အရာရှိကြီး သစ်ထူးလွင်
5/29/2011 12:47:00 PM
မင်းသား ရဲတိုက်ရဲ့ 'ရဲတိုက်ဖောင်ဒေးရှင်း'ကနေဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေပါပြီ။ "အရင်ကတော့ ခင်တဲ့သူတွေထဲက ၀ိုင်းဝန်းကူညီချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပေမယ့် အခုတော့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေခေါ် ပြီး သေချာ သင်တန်းပေးပြီး လုပ်ချင်တာကြောင့် ဒီလိုပါဝင်ကူညီချင်တဲ့
5/29/2011 12:30:00 PM
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပရိသတ်ရှေ့ ပြန်လာမယ့် "ACID"
"ACID" အဖွဲ့မှ အဖွဲ့သားနှစ်ဦးဖြစ်သည့် ရန်ရန်ချန်းနှင့် ဇေယျာသော်ကို ရန်ရန်ချန်း၏ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ နေအိမ်တွင် တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ကောင်းထက်
ဟစ်ပ်ဟော့ဂီတကို မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်း ပြောရင် အနဂ္ဂ၊ ဟိန်းဇော်၊ ရန်ရန်ချန်း၊ ဇေယျာသော်ဆိုတဲ့ လူငယ်လေး ယောက်ရဲ့ ဓဗဃှီုဓ ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကို အားလုံးသတိရကြမှာပါ။ဂီတသစ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချပြပြီး အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်တည်းနဲ့ အောင်မြင်မှု ရခဲ့တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကဟစ်ပ်ဟော့သမိုင်းမှာတော့ ပထမဆုံး စာမျက်နှာ
5/29/2011 12:23:00 PM
မီးလောင်ပြီး တစ်နှစ်ကြာပိတ်ထားသော မင်္ဂလာဈေးတတိယထပ် မေ ၂၆ တွင် ပြန်ဖွင့်
နေလင်းအောင် May 29 2011
မင်္ဂလာဈေး၌ မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့သော အထပ်များကို ပြန်လည် ပြုပြင်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်။ ဈေး၏ တတိယထပ်ကို မေလ ၂၆ ရက် နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ၂၀၁၀ မေလ ၂၄ ရက် နေ့၌ ထိုဈေး၌ လောင်ကျွမ်းခဲ့သော မီးကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု ကျပ်သန်း ပေါင်း ၂၃၃၃၆ သန်း ရှိခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ - အေးဇော်မျိုး
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ မီးလောင်မှုကြောင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင် နေစဉ်အတွင်း တစ်နှစ်ကြာ ပိတ်ထားသော ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဈေးတတိယ ထပ်အား ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည်။အစပိုင်းတွင် ပြင်ဆင်ရှင်းလင်းမှု များကြောင့် ဈေးရုံတစ်ခုလုံးကို ပိတ် ထားခဲ့သော်လည်း မြေညီထပ်၊ ပထမထပ်နှင့် ဒုတိယထပ်တို့အား ၂၀၁၀ ပြည့် နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ထို့ပြင် စတုတ္ထထပ်နှင့် ခေါင်မိုးထပ် တို့ကိုလည်း ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ် နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မင်္ဂလာဈေးကြီးတွင် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၄ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်က လေးလွှာရှိ ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းတွင် မီးဖို အပူလွန်ကဲမှုမှ တစ်ဆင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မီးလောင်မှုသည် ၂၁ နာရီ ကြာမြင့်ခဲ့ကာ ဈေးကြီးလေးလွှာရှိ ဆိုင်ခန်း ၇၉၇ ခန်း၊ ပဉ္စမထပ်ရှိ ဂိုဒေါင် ၄၇ လုံး၊ စားသောက်ဆိုင် ၃၃ ဆိုင်၊ စင်တင် တေးဂီတဆိုင် တစ်ဆိုင်တို့ မီးလောင် ကျွမ်းခဲ့ရပြီး ကျပ် ၂၃,၃၃၆ သန်းဖိုးခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
5/29/2011 12:16:00 PM
UNFCCI မှ ဒေါက်တာ မောင်မောင်စိုး ဟောပြောပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
May 28 2011 ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုး
5/29/2011 07:11:00 AM